भक्तपुर अस्पताल नयाँ स्वरूपमा- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
भक्तपुर अस्पताल नयाँ स्वरूपमा
भक्तपुर — मुलुककै दोस्रो जेठो अस्पताल भक्तपुर अस्पतालले नयाँ स्वरूप पाउने भएको छ । वीर अस्पतालपछिको दोस्रो ११४ वर्ष पुरानो भूकम्पले क्षतिग्रस्त भक्तपुर अस्पतालको भवन रेक्ट्रोफिटिङ गर्ने तथा सुविधायुक्त डिपार्टमेन्टसहितको नयाँ भवन थपिने भएको हो ।
बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादव, प्रदेश नम्बर ३ का सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल, बेलायती विकास नियोग (डीएफआईडी) लन्डनका महानिर्देशक रिचार्ड क्लार्कलगायतले अस्पतालको रेक्ट्रोफिटिङ तथा नयाँ भवन निर्माणबारे औपचारिकघोषणा गरेका छन् ।
डीएफएआईडीको सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम (एनएचएसएसपी) अन्तर्गत अस्पताल भवन संरचनाहरू रेक्ट्रोफिटिङ गर्ने कार्यक्रम छ । रेक्ट्रोफिटिङअन्तर्गत भूकम्पीय प्रबलीकरण स्वास्थ्योपचारका लागि उपयोगी हुने गरी स्तरोन्नति र खानेपानी, ढल, फोहोर, भित्री हावाको गुणस्तर व्यवस्थापनलगायत समावेश गरेको जनाएको छ ।
नयाँ भवनमा सुविधा सम्पन्न प्रसूति वार्ड, आईसीयू सेवा सञ्चालन, ओपीडी सेवा र पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । शल्यक्रिया कक्ष, ओपीडी कक्ष, भान्सा घर, शौचालय, शव गृह तथा पोस्टमार्टम कक्ष, पार्किङ लगायतको भौतिक संरचना निर्माण हुनेसमेत जनाएको छ । अस्पतालको सहजीकरणमा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी भवन निर्माण तथा रेक्ट्रोफिटिङ प्रक्रिया थालिएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुधा देवकोटाले बताइन् ।
कुल २० करोड ३४ लाख २५ हजार ५ सयमा नयाँ र मौजुदा भवन रेक्ट्रोफिटिङका लागि १२ करोड ४१ लाख ८४ हजार ३ सय रुपैयाँ गरी ३२ करोड ७६ लाख ९ हजार ८ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोसमेत जनाइएको छ ।
अस्पतालमा बढ्दो बिरामीको चापलाई नवनिर्मित भवनले राहत प्रदान गर्ने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । पुरानो र भूकम्पका कारण आंशिक क्षति पुगेको पानी चुहिने अस्पतालमै सेवा दिन बाध्य भएको अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष मिलन सुवालले बताए । ‘श्री चन्द्रलोक डिस्पेन्सरी’ को नामबाट १९६१ मा स्थापित १५ शय्याको अस्पताल हाल २०६० देखि ७५ शय्या सञ्चालित छ ।
दिन प्रतिदिन बिरामीको चाप बढ्दै गएकाले अस्पताल प्रशासनले ७५ शय्यालाई थप गरी १ सय २५ शय्या पुर्‍याउन माग गरेको छ । अस्पतालमा दरबन्दी नहुँदा आईसीयू सञ्चालन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले डाक्टर र कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने उनले बताए । अस्पतालमा डिपार्टमेन्टको व्यवस्था छैन ।
अस्पतालको नयाँ भवनसँगै आईसीयू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.देवकोटाले बताइन् । अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्ने, पार्किङ व्यवस्थापन, बगैंचा निर्माण, एक्सरे, प्रोटेबल यूएसजी, ल्याबक्रोस्कोपी, इन्डेस्कोपीलगायत सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताइन् । अपांगमैत्री नयाँ भवनमा लिफ्ट जडान गरी मौजुदा भवनहरूमा समेत आवागमनमा सहजता ल्याउने गरी डिजाइन गरिएको छ ।
प्रकाशित : माघ २४, २०७५ ०८:०५
बडिखेल चिनाउँदै स्थानीय
पशुपतिमा आउने पर्यटकलाई प्याकेज टुर बनाएर भ्रमणमा ल्याउने योजना
माघ २४, २०७५ प्रशान्त माली
ललितपुर — उपत्यकाभित्र गोदावरी आकर्षक गन्तव्य हो । गोदावरी क्षेत्रमै पर्छ बडिखेल । पर्यटकीय गन्तव्यस्थल भए पनि ओझेलमा परेको भन्दै प्रवद्र्धन गर्न बडिखेलवासी जुटेका छन् ।
स्थानीयले तपेश्वर महादेव विकास तथा संरक्षण समिति बनाएर धार्मिक महा–महोत्सव आयोजना गर्न खटिएका हुन् । यहाँको पूर्वी डाँडामा तपेश्वर महादेवको ध्यानस्थल र पुरातात्त्विक महत्त्वका पोखरी छन् ।
एकै ठाउँमा वनदेवी, तपेश्वरलगायत ४ वटा गुफा र परम्परागत मौरी घर यहाँको विशेषता हो । कुनै गुफाबाट कतै तातो कतै चिसो हावाको बहाव आउँछ भन्दा प्रायलाई अचम्म लाग्न सक्छ । यहाँँका स्थानीयले यसलाई दैवी शक्ति महादेवको श्वासप्रश्वास प्रक्रियाको रूपमा लिन्छन् । बाँस (प्याङ) बाट डाला, नाङ्लो बुन्ने छुट्टै भाषा बोल्ने पहरी जातिको गुजुमुज्ज बस्ती यहाँको मुख्य आकर्षण हो ।
बडिखेल पस्मा टोलका ५६ वर्षीय चन्दबहादुर पहरी बाँसको गेट बनाउन छाली काटेर मिलाउँदै गरेको अवस्थामा भेटिए । उनी गेट बनाउन खटेको चार दिन बित्यो । भन्छन्, ‘पहिला महादेवको ध्यानस्थलबाट झरना झथ्र्यो । अहिले डाँडाको पोखरी सुकेकाले बन्द छ । पोखरीलाई जीवन्त दिन सकेमा फेरि पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ ।’
चमस टोलका ३५ वर्षीय राधाकृष्ण, सोम, लक्ष्मण र विजय गेटको छानो राख्न तारले बाँस कस्दै थिए । उनीहरूले गेट बनाउने जिम्मा लिएका हुन् । उनीहरू जस्तै गाउँका अन्य युवा कोही सिढी बनाउन त कोही बाटो खोल्न सरसफाइमा जुटेका छन् ।
तपेश्वर महादेव धार्मिक महा–महोत्सवका सहसंयोजक सन्तकुमार नगरकोटी भन्छन्, ‘एउटा गुफाभित्र महादेव तपस्यामा विलीन भएर बसेको शिला अझै पनि देख्न सकिन्छ । कतिपय गुफा कुन प्रयोजनका लागि बनाइएको भन्ने अध्ययन अनुसन्धानकै विषय छ ।’ उनले महोत्सवले धार्मिक पर्यटक वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘पशुपतिमा आउने पर्यटकलाई प्याकेज टुर बनाएर यहाँ भ्रमणमा ल्याउने योजना छ,’ उनले भने ।
पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउन सांसद कोषबाट ५० लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ । गोदावरी नगरपालिकाबाट पनि ५ लाख
छुट्याएको छ । नगरपालिकाले सांसद कोषको बजेटमध्ये १० लाखबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन र बाँकी ४० लाखबाट महादेव मन्दिर, भक्तजनका लागि दर्शन गर्न सिढी, पिकनिक स्पट बनाउने योजना बनाएको छ । महादेवको शिला कोडु खोलाबाट एक किमि माथि डाँडामा पर्छ ।
गोदावरी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष मुकुन्दबहादुर पहरीले ललित घुम्ती सडकबाट ७ सय ५० मिटर लामो सिँढी बनाउने लक्ष्य रहेको बताए । ‘यसका लागि सम्झौता भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘डीपीआर तयार भइसकेपछि सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौं ।’ उनले महादेव र गुफा अवस्थित वनलाई धार्मिक वनका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको बताए । ‘यसका लागि नगरपालिकाबाट आवश्यक बजेटछुट्याउन पहल गरिनेछ,’ उनले भने ।
तपेश्वर महादेव स्थलबाट साढे ६ किमि पूर्वमा कुना खोला पर्छ । त्यहाँबाट महादेव स्थलमा ट्यांकी निर्माण गरी भक्तजन र बस्तीमा पानी वितरण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट २० लाख बजेट परेको उनको भनाइ छ । ‘पानी ल्याउन विद्युत् लाइन विस्तार गर्न लगनखेल विद्युत् प्राधिकरणबाट ठेक्कापट्टा भइसकेको छ,’ उनले भने ।
बडिखेलमा पर्यटकका लागि अर्को आकर्षण भनेको बाँसबाट चोया उत्पादन गरी सरसामान उत्पादन गर्ने कलाको अवलोकन हो । यहाँ बाँसका सरसामान निर्माण गरी बेचेर गुजारा गर्ने २ सय परिवार छन् । उनीहरूसँग बाँसबाट नाङ्ला, डाला मात्र नभई प्याक, डस्टबिन, फूलदानी, ब्याच,फ्रेम, चाल्ना, पेन बक्स, घडी, गमला,मसला राख्ने भाडा, टोपीलगायत वस्तु बनाउने सीप पनि छ ।
माझ टोलका ७५ वर्षीय शंकर पहरी भन्छन्, ‘यो पहरीको पुख्र्यौली पेसा हो । कुनै बेला यी सामान क्यानडा, फ्रान्सलगायत युरोपेली मुलुकमा समेत निर्यात हुन्थ्यो । अहिले स्वदेशमै बिक्री हुन छाडेका छन् ।’ उनले यसको संरक्षण गर्न नगरपालिकाले छुट्टै नीति नै तर्जुमा गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘पोलिथिनको नाङ्लो, डोको बजारमा आएपछि पेसा झन् संकटमा पर्दै गयो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि बाँस, नाङ्लो बाँध्ने नाइलनको डोरीको मूल्य प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।’
उनले घरसम्म आएर खरिद गर्ने ग्राहक पनि कम हुँदै गएको बताए । ‘होटल, लज व्यवसायीले पनि सामान किन्न छाडेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले युवा पुस्ता निराश हुँदै गएका छन् ।’ बडिखेलबाट फुल्चोकी र लेले मनकामना हाइकिङ गर्ने उपयुक्त मार्ग छ । महोसत्व माघ २७ देखि फागुन ६ सम्म ९ दिन चल्दै छ ।
प्रकाशित : माघ २४, २०७५ ०८:०३